Iji VIM: Nkuzi nkuzi. | Site na Linux
Ọ dịtụghị mgbe m chere na m ga-ekwu nke a, mana m na-enwe mmasị na nchịkọta akụkọ kacha mma maka ebe ahụ GNU / Linux: VIM.
Vim (nke Bekee M hụrụ IMproved) bụ mma mbipute nke onye edemede ederede vi, dị na sistemụ niile UNIX.
Onye na-eme ihe nkiri, Bram Moolenaar, gosipụtara ụdị mbụ na 1991, ụbọchị nke ọ gbanwere ọtụtụ ndozi. Akụkụ bụ isi nke ma Vim na Vi bụ na ha nwere ụdị dịgasị iche iche iji gbanwee n'etiti ịrụ ọrụ ụfọdụ, nke na-eme ka ha dị iche na ndị editọ kachasị, nke nwere naanị otu ọnọdụ nke etinyere iwu site na iji isi njikọ ma ọ bụ eserese eserese.
Abụ m otu n'ime ndị chere na nke a bụ onye ndezi maka "octopuses" ma ọ bụ ndị nwere ihe karịrị mkpịsị aka 10, n'ihi na eziokwu dị mfe nke inwe ọtụtụ mkpirisi ụzọ mkpirisi mere ka m chee na VIM ọ bụ "ogologo anụ mmiri" nke ndị nchịkwa njikwa. Nke bụ eziokwu bụ na kemgbe ụnyaahụ ka m na-amụta iji ya (ọbụlagodi na ihe dị oke mkpa) ma m na-eji ya, na kasị njọ (ma ọ bụ kacha mma) ọ bụ na m na-amasị ya nke ukwuu.
Enwere m ntụsara ahụ mgbe niile nano, ma ọ bụ eziokwu na onye ndezi akụkọ a dị oke mkpa. Mgbe anyị nwere eserese eserese, cursor enwere ike iji depụta / mado, mana mgbe anyị nọ na TTY ihe na-agbanwe. Nke ahụ bụ uru mbụ m hụrụ VIM. Akụkụ ndị ọzọ masịrị m bụ:
Nhọrọ nke ederede na kọlụm.
Nkọwapụta nke usoro.
N'igosipụta ihe mkpuchi, brackets na braces (na-eme ka ọ dị mma maka mmemme).
Dị ike nke ukwuu, ọbụlagodi mgbe etinyere faịlụ anyị na-edezi, ọ na-enye anyị ohere iweghachite ya ma emechaa.
Ebe a ị nwere ike ịhụ ọtụtụ ndị ọzọ ...
Naanị ederede editọ na njikwa (n'ime ndị m maara) na "na-eru nso" ka VIM es - MCEdit, Ederede ederede nke MC. Ma rịba ama ihe e kwuru n'okwu ahụ dị n'elu. VIM nwere onye editọ GTK. Mana echiche nke post a abụghị ka ere gị ma ọ bụ gbaa ha ume ka ha jiri VIM, ọ bụ naanị ụzọ ịgwa gị na ọ dị mfe iji karịa ka ọ dị n'ezie.
Nkuzi nkuzi banyere iji VIM
Achọrọ m ịhapụ gị usoro ụzọ mkpirisi keyboard, mana echere m na ọ ga-aka aba uru ma ọ bụrụ na m gosipụtara gị ka esi arụ ọrụ site n'omume. Ihe mbụ anyị ga-eme bụ ịwụnye VIM ma ọ bụrụ na anyị emebeghị ya, ma ọ bụ ọ bụrụ na ọ baghị site na ndabara na nkesa kachasị amasị anyị. Ozugbo arụnyere, anyị na-emeghe ọnụ ma tinye:
Anyị ga-ahụ ihe dị ka nke a:
Ugbu a, anyị pịa igodo I ma ọ bụ igodo Insert ka ịgbanwee site na ọnọdụ iwu ka ịdezie ọnọdụ wee malite ịpị ihe. Anyị na-ede ihe ọ bụla, ọ bụrụ na ọ ga-ekwe omume, nke ahụ dị ogologo karịa ahịrị abụọ. M atụ tinye:
Ugbu a, anyị pịa igodo ESC iji pụọ mode edit, gaa na mmalite nke akwụkwọ na keyboard akụ na pịa igodo V. Will ga-achọpụta na n'okpuru na-ekwu ugbu a VISUAL. Jiri akụ dị ala anyị na-akanye ederede niile anyị dere. Mgbe anyị nwere ihe niile ahọpụtara, anyị pịa igodo ahụ Y. Ozugbo emere nke a, ị ga-ahụ na n'okpuru ya na-egosi ọnụọgụ nke ahịrị edepụtaghachi.
Ugbu a, anyị na-agagharị ntakịrị ala ma pịa igodo ahụ P. Oge ọ bụla anyị pịa ya, a ga-ede otu ederede ahụ. Ọ bụrụ na igodo ya Y anyi pia igodo X, a ga-ebipụ ederede anyị họọrọ. Anyị nwere ike igodo ya ọzọ na igodo P.
Ugbu a, anyị ga-echekwa akwụkwọ nyocha ahụ. Anyị pịa ESC ma ọ bụrụ na anyị na-na edit mode na anyị dee :w, nke ahụ bụ, isi abụọ na a W. Ihe nke a na-eme bụ ide ma ọ bụ chekwaa ihe anyị na-eme. Ọ bụrụ na anyị emechaa dee :q anyị ga-apụ onye nchịkọta akụkọ. Ọ bụrụ na ihe anyị chọrọ bụ ịchekwa ma mechie, anyị na-ede 😡.
Ugbu a bụ aghụghọ ikpeazụ. Ka e were ya na emechiri ọnụ ahụ na mberede wee tufuo akwụkwọ ahụ. Ihe anyi kwesiri ime bu:
anyị ga-enweta ihe dị ka nke a:
Ọ bụrụ na ị lee anya na njedebe anyị nwere usoro nhọrọ. Na nke a anyị pịa igodo R iji weghachite akwụkwọ gara aga, mgbe ahụ ọ ga-ajụ anyị pịa Tinye Na voila, anyị nwere ike ịga n'ihu ebe anyị kwụsịrị. Ugbu a, ọ bụrụ na site na ohere anyị kụrụ igodo ahụ E (dezie) anyị nwekwara ike weghachite akwụkwọ ahụ site na ịpị ihe : gbakee, anyị ga-enweta ihe dị ka nke a:
N'okwu a nhọrọ m bụ ide nọmba 1 na voila, a na-enwetaghachi ọrụ anyị ọzọ.
Ọ bụrụ na ị chọrọ iji VIM mfe, mgbe ahụ ị nwere ike iwunye GVIM, nke bụ otu ihe iji Gtk ọba akwụkwọ maka iji Menus na nhọrọ ndị ọzọ na-akwado ọrụ onye ọrụ.
Enwere ọbụna ndọtị maka Firefox oku - Ntughari, nke na-enye anyị ohere ijikwa ihe nchọgharị ahụ ka ọ bụrụ VIM ọ ga-abụ 😀
Ma nke a Olee otú, a na-anabata ntụnye ma ọ bụ ozi ọ bụla ka anyị wee nwee ike ịmụtakwu ihe bara uru gbasara ya VIM.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » Aplicaciones » Iji VIM: Nkuzi nkuzi.
M ga-eji Gvim, agbanyeghị na ahụghị m syntax ahụ na-egosi na ọ ga-adị mma ma ọ bụrụ na ị tinye onyonyo ụfọdụ ederede na HTML iji hụ ka ihe niile ahụ si dị. Aga m eso Vim rụọ ọrụ wee mee otu n'ime nyocha miri emi dịka m mere na Gedit… nye m otu izu ma enwere m ya.
Ọ bụrụ n’ịchọrọ ịhụ otu syntax pụta ìhè na-arụ ọrụ mgbe ahụ m ga-ahapụrụ gị ụfọdụ atụ.
Na na njikọ n'okpuru ọtụtụ atụmatụ iji mee ka ọ bụrụ ihe na-atọ ụtọ. xP
Dị ezigbo mma vim nkuzi, enwere olile anya na a ga-emechaa, obere ọfụma ma ọ bụ ụfọdụ aghụghọ, nke enwere ike iji ngwaọrụ a;
maka oge ịbanye n'ụwa a nke vim ugbu a
N'oge m na-arapara na emacs, nke na-adịbeghị anya enwere m ọnya karịa, na aka nke ọzọ vim na-eme ka o siere m ike ịga n'etiti ederede.
PS: Ekele! Ha bụ ndị mbụ na Nhazi.
Anyị ndị nwoke na-eji Emacs, ị maara!
Mgbe m bidoro ịgụ "Ọ dịtụghị mgbe m chere na m ga-ekwu nke a, mana m na-enwe mmasị na nchịkọta akụkọ kachasị mma maka ọnụ na GNU / Linux ..." Echere m: nnukwu, ọ chọpụtara Emacs!
Kama ọ na-enyo na Ihọd na-apụ na queers 😛 ihe otu onye okụt ke net!
Ohh na macho. Echere m na ị na-eji LFS, n'ihi na iji distro na ihe niile na-ata ata, echere m na ọ bụkwa fagot nri?
Man emacs dị m ka mfe karịa vim mana maka agba ụtọ.
vimtutor bụ nkuzi mmekọrịta dị mma, etubere ya ka emechaa ya na nkeji 25-30. ukwuu tụrụ aro!
Nke ahụ doro anya na-arụ ọrụ maka m, aghaghị m ịrụ ọrụ na nke ahụ
Ee, n'ezie Vimtutor dị ukwuu ...
iku ume dijo
Gwuo egwuregwu a na ọ bụ mgbe ị ga - akwụsị iji vim ma ị ga - amụta iji ya nzuzu, n'ezie, ị ga - eme ọtụtụ ihe na egwuregwu a ihe kachasị mkpa banyere vim dị ka ịmara otu esi aga ngwa ngwa.
Adịghị m onye nrụpụta, yabụ ihe m kwesịrị ịme: dezie a .conf ma ọ bụ tinye aka m na pkbuild site n'oge ruo n'oge, ya na NANO ọ zuru m ma enwere m ọtụtụ. N'otu oge maka ule m meghere faịlụ na VIM na amaghị m otu esi apụ ebe ahụ.
Ihe mara mma maka ndị bidoro na vim, ọbụlagodi m chere na ọ bụ nnukwu anụ mana dịka ihe niile, ọ bụ naanị omume. xP
M na-ahapụrụ ọtụtụ nkata maka ndị chọrọ ịnwale.
@elav, a hapuru m vimrc gi ka i were some config nke na aru gi aru 😉
Ana m enweta uto maka onye editọ kachasị mma nke dị maka GNU / Linux
Likechọrọ ịkpata ire ọkụ, ọ bụ? Nke a nwere ike bụrụ ọkụ kacha ochie 😛
Ezigbo nkuzi! imeela nnọọ 😀
na-akpali nnọọ mmasị: 3
Zaghachi ka esme
Obinna Okonkwo dijo
Ihe bụ isi dị mma mgbe niile.
Rene, onye Mexico, nwere ike. dijo
Ọ dị mma ịmara ntakịrị ihe gbasara ihe niile, ọ bụrụ na otu ụbọchị ịchọrọ ya, nwoke maara ihe ga-eji ihe mmadụ ibe ya chụrụ kpọrọ ihe.
Zaghachi Rene, si Mexico, nwere ike.
Ezigbo nkuzi mana abụ m ihe ọhụrụ na nke a ma amaghị m ịgbakwunye onye ndezi brigthscript na gvim https://github.com/chooh/brightscript.vim.git You nwere ike inyere m aka